Abathengisi bokushisa abakhiqizi - China Abashintshi Bokushisa Okushisayo & Abahlinzeki
Holtop Modular Air selehlile C ...
Uphahla Oluhlanganisiwe Lomoya ...
Igumbi Single Wall egibele Du ...
I-Airwoods Yokufaka Umoya Wokuhlanza
Inengqondo Ye-Crossflow Plate Heat Exchangers
Isimiso sokusebenza seSensible Crossflow Plate Heat Exchangers: Amafreyimu amabili e-aluminium angomakhelwane akha isiteshi sokusakaza komoya okusha noma okukhipha umoya. Ukushisa kudluliswa lapho imifudlana yomoya igeleza inqamula eziteshini, futhi umoya omusha nomoya wokukhipha uhlukaniswe ngokuphelele. Izici: Ukubuyiselwa kokushisa okunengqondo Ukwehlukaniswa okuphelele kwemifudlana yomoya omusha nokuqeda umoya, ukusebenza kahle kokuthola ukushisa kuze kufike ku-80% 2-side cindezela ukwakheka komphetho ogoqiwe ophindwe kabili Ukubekwa uphawu ngokuphelele. Ukumelana nokwehluka kwengcindezi phezulu ...
I-Cross Counterflow Plate Heat Exchangers
Isimiso sokusebenza seCross Counterflow Air Sible to Air Plate Heat Exchangers: Amafreyimu amabili e-aluminium angomakhelwane akha isiteshi sokusakazwa komoya okusha noma kokukhipha umoya. Ukushisa kudluliswa lapho imifudlana yomoya ngokwengxenye igeleza igeleza futhi ihlukanise imifudlana yomoya igeleza ikhawunta ngeziteshi, futhi umoya omusha nomoya wokukhipha uhlukaniswe ngokuphelele. Izici Main: 1.Sensible ukushisa alulame 2.Total nokwehlukana fresh & qeda air nemifudlana 3.Heat alulame nekghono kuze 90% 4.2-ohlangothini cindezela ekubumbeni 5 ....
I-Crossflow Plate Fin Ingqikithi Yokushisa Okushisayo
Isimiso sokusebenza seHoltop Crossflow Plate Fin Ingqikithi Yokushisa Okushisayo (I-ER Paper yomgogodla wokushintshaniswa kwe-enthalpy) Amapuleti ayizicaba kanye namacwecwe lukathayela akha iziteshi zokusakazwa komoya okusha noma okukhipha umoya. iyatholakala. Izici eziyinhloko 1. Yenziwe ngephepha le-ER, elivezwa wukuqina okuphezulu komswakama, ukuqina komoya okuhle, ukumelana kahle nezinyembezi, nokumelana nokuguga. 2. Ubuchwepheshe obuhleliwe ...
Ama-Rotary Heat Exchangers
Izici eziyinhloko ze-rotary heat exchanger: 1. Ukusebenza kahle okuphezulu kokuthola ukushisa okunengqondo noma kwe-enthalpy 2. Uhlelo lokufaka uphawu lwe-labyrinth kabili luqinisekisa ukuvuza komoya okuncane. 3. Imizamo yokuzihlanza yandisa umjikelezo wenkonzo, ukunciphisa izindleko zesondlo. 4. Umkhakha wokuhlanza okuphindwe kabili unciphisa i-carryover kusuka emoyeni wokukhipha ungene ekusakazweni komoya kokuphakelwa. 5. I-life-time-lubricated bearing ayidingi sondlo ngaphansi kokusetshenziswa okujwayelekile. 6. Izipikha zangaphakathi zisetshenziselwa ukubophela imishini yokunamathisela i-rotor ukuqinisa isondo. 7. ...
Amapayipi Okushisa Okushisa
Isici Esiyinhloko se-Heat Pipe Heat Exchangers 1. Ukufaka ishubhu le-cooperative nge-hydrophilic aluminium fin, ukumelana nomoya ophansi, amanzi anciphisa amanzi, i-anti-corrosion engcono. 2. Uhlaka lwensimbi oluhlanganisiwe, ukumelana okuhle nokugqwala nokuqina okuphezulu. 3. Isigaba sokuhlukanisa ukushisa sihlukanisa umthombo wokushisa nomthombo obandayo, khona-ke uketshezi ngaphakathi kwepayipi akunakho ukudlulisa ukushisa kuye ngaphandle. 4. Isakhiwo somoya esixubile sangaphakathi, ukusatshalaliswa kokuhamba komoya okufanayo, okwenza ukushintshana ngokushisa kwanele. 5. Ukuhluka okuhlukile ...
Lisebenza kanjani isondo le-desiccant? Isondo le-desiccant elilula kalula lisebenza kumthetho wobuthakathi, okuyi-adsorption noma inqubo yokumuncwa lapho i-desiccant isusa khona umusi wamanzi ngqo emoyeni. Umoya ozomiswa udlula esondweni le-desiccant bese i-desiccant isusa umhwamuko wamanzi ngqo emoyeni futhi iwubambe ngenkathi ijikeleza. Ngenkathi i-desiccant ethwele umswakama idlula emkhakheni wokuvuselelwa, umhwamuko wamanzi udluliselwa emfudlaneni womoya oshubile, okuyi ...